နုားလည်ရ ခက်ခက် | Sanchaung Journal
June 21, 2011 admin	2 Comments
ဒီနေ့ကျွန်တော် စာတစ်ပုဒ်ကို အင်္ဂလိပ်လို ရေးကြည့်မိတော့ – အခက်အခဲတခု သွားတွေ့ ခဲ့သည်။
ေ၇းနေတဲ့ ခေါင်းစဉ်က မြန်မာ လူမျိုး အကြောင်းပါ။
မြန်မာလူမျိုးကို အင်္ဂလိပ်လို ဘယ်လိုရေးရမလဲ။
Myanmar လိုပဲ ရေး၇မည်လား- ဒီလို ရေးလိုက်မိရင် ဖတ်တဲ့သူက ဘယ်လိုနားလည်မှာလဲ။
အရင်တုန်းက (ငယ်ငယ်က သင်ခဲ့ရတာ) နိုင်ငံကို Burma ၊ လူမျိုး ကို Burmese စသည်ဖြင့် အတိအကျ သင်ခဲ့ရသည်။
ခက်တာက အခု –
Passport ထဲမှာ လူမျိုး (Nationality) ကို Myanmar လို့ ရေးထားသည်။
နိုင်ငံကလည်း Myanmar ။
ဒီတော့ ကျွန်တော် Myanmar လို့ရေးရင် လူမျိုးအနေနဲ့စာဖက်သူ နားလည်မှာလား။ နိုင်ငံအနေနဲ့ စာဖက်သူ နားလည်မှာလား။
အင်္ဂလိပ်စာကို English လို့ ရေးပါသည်။
မြန်မာစာ ကို အင်္ဂလိပ်လို့ဘယ်လိုေ၇းမလဲ- Myanmarsar လို့ ရေးမှာလား။ Myanmar လို့ ပဲ ရေးမှာလား။ အခုထိ အတိအကျ မသိသေးပါ။
Wikipedia မှာက Official Language က Burmese တဲ့။
Mr. Brown learned Myanmar in Myanmar.
ဒါဆို သင် ဘယ်လိုနားလည်မှာလဲ။
Mr. Brown သည် မြန်မာပြည်မှာ မြန်မာနိုင်ငံ အကြာင်းလေ့လာခဲ့တာလား၊ မြန်မာလူမျိုးအကြောင်း လေ့လာခဲ့တာလား။ မြန်မာစာကို လေ့လာခဲ့တာလား။
Mr. Brown is good in English.
ဒါဆို ရှင်းပါသည်။ Mr. Brown သည် English စာ ကောင်းကောင်းနားလည်ပါသည်။
Mr. Brown is good in Myanmar.
ဒါကို သင်ဘယ်လိုနားလည်မှလဲ။ Mr. Brown သည် မြန်မာပြည်တွင်းမှာ ကောင်းပါသည်။ တခြားနိုင်ငံတွေမှာတော့ မကောင်းဘူးလား? ။
Mr. Brown learned Burmese in Myanmar.
ဒီလို ရေးရင် သင် ဘယ်လိုနားလည်မှာလဲ။
ဒီလို ရေးလို့ ကတော့ ပထမဆုံး ဒီကျောင်သား အမှတ်လျော့ခံရမှာ သေချာတယ်။ ကျောင်းသား မှားလို့မဟုတ်ဘူး – နိုင်ငံတော် အစိုးရရဲ့ အရေးယူခံရမှာ ဆရာမ ကြောက်လို့ ။
စာသင်ကျာင်းတွေမှာ ဘယ်လိုများသင်နေပါလိမ့် – ကျွန်တော် အရမ်းသိချင်လာပါသည်။
The Book about Myanmar
The Value of Myanmar
The Past of Myanmar
မြန်မာ လူမျိုးအကြောင်း ပြောနေတာလား။ မြန်မာ နိုင်ငံအကြောင်းပြောနေတာလား။ ဘယ်လို ခွဲခြားနိုင်မည်လဲ။
ခက်ပြီ- အခုမှ ခက်ပြီ။ ကိုယ့်နိုင်ငံအကြောင်း သူများ(နိုင်ငံခြားသား)က မေးလာတဲ့အခါ
မသိဘူးလို့ ပြောရရင်လည်း ရှက်စရာ။
သေချာ ပြောရအောင်လည်း ကိုယ့်နိုင်ငံအကြောင်း ကိုယ်တောင် နားမလည်။
Myanmar people are very nice. မြန်မာလူမျိုးများသည် လူကောင်းများဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာလူမျိုး ကို Myanmar People လို့ ရေးလိုက်ပါသည်။ မှန်ချင်မှ မှန်မယ် ဒါပေမယ့် စာဖတ်သူ ကွဲပြားစွာနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါသည်။
Mr. Brown learned Myanmar from myanmar people in Myanmar.
Mr. Brown ဘာတွေ သင်ခဲ့ပါသလဲ။
Previous Postသတင်းထောက်ဖြစ်လို့တဲ့ ပိုက်ဆံ မယူရဲကြဘူးNext PostInternet vs Blog
2 thoughts on “နုားလည်ရ ခက်ခက်”
It’s not “good in English”, but “good at English.”
Thank you for your point. I am not very sure about this structure. I have found this link.